> Resource > iPhone > Talooyin Mase ka Android inay iPhone
Tan iyo markii cusub iPhone 6S / 6S Plus sii daayay 2015, dad badan oo ka helay xiiso u leh oo aad jeceshahay in aad hesho this model iPhone cusub. Sidaas arrinta ma Adiga oo ka beddelanaya Android inay iPhone ama kaliya bilaabin isticmaalka iPhone cusub, aad samaynayso doorasho wanaagsan.
Faa'iidooyinka u Mase ka Android inay iPhone
Guud ahaan, marka aad ayaa ugu danbeyn go'aansaday in ay beddelaan waqti ka dheer loo isticmaalo Android inay iPhone, waxaan hubaa in quruxsan in aad wax badan ka bartay oo garan faa'iidooyinka iPhone. Inkasta oo aan weli door bidaan si loo caddeeyo qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah ee aad ka dib markii uu helay demin lahaa Android inay iPhone.
Waxaad ka heli lahaa user interface ka wanaagsan hufan on iPhone. Waxaynu wada ognahay Google ka soo shaqeeyay badan oo isku dayay in uu Android ka sii macaan oo dhakhso badan, oo ma ku ool ah hagaagtay. Laakiin sida arrin xaqiiqada, iPhone weli ka shaqeeya macaan oo ka dhakhso badan Android.
The app ecosystem iPhone run ahaantii waa mid laga cabsado oo saaxiibtinimo. Waxaa la rumaysan fududahay in hagaagsan barnaamijyadooda iyo sidoo kale macluumaadka u dhexeeya aad qalabka macruufka kala duwan. Sida aynu wada ognahay, Store iyo Google Apple App ee Play heysanaa muddo ah barnaamijyadooda tiro isku mid ah, oo inta badan ay barnaamijyadooda ugu waaweyn waxaa laga heli karaa labada dhufto, laakiin barnaamijyadooda cusub ama updates ka soo baxaan ugu horeysay ee macruufka.
Haddii aad tahay dadka isticmaala Mac, waxaa taasi aad uga sahlan in ay isticmaalaan iPhone in ay la shaqeeyaan badan Android. Waxaad si fudud wareejin karaan xogta iyo content u dhaxeeya, samaynta iyo ka jawaabi wicitaanada iyadoo la kaashanayo macruufka cusub ee la sii daayay 9, waxa laga yaabaa in shaqo adag haddii aad isticmaalayso Android ah ee Mac ah. Si kastaba, weli waxaa jiro xal haddii aad ku eekaan waa in.
Sidee si ay u gudbiyaan Data Marka Mase ka Android inay iPhone
Ma dhahayo Android ma aha weyn, kaliya rabaa inaad ogaado faa'iidooyinka aad ku raaxaysan karaan marka bedesheen ka Android inay iPhone. Ka dib markii aad heshay iPhone cusub, dhibaatada ugu horeysay oo ugu headachy aad la kulanto laga yaabaa in uu yahay sidii ay u content ka Android wareejiyo iPhone . Waa wax aad u kala duwan oo ka kala iibsiga ka Android inay Android ama ka iPhone si iPhone , waana ka sii adag tahay in la gaaro tan waxaa loola jeedaa in ay ka gudbaan xogta madal wareejinta. Waxa kale oo aad kala socon kartaa this guide buuxa si ay u gudbiyaan xogta si fudud iyo si ammaan ah u dhexeeya telefoonada kasta, iyadoo aan loo eegayn waxa aad isagoo telefoonada Android, iPhone, ama Nokia.
Inkasta oo aan werwerin, waxaan heysanaa xal free halkan soo jeediyay in kooxda taageerada rasmiga ah ee Apple, waxa si faahfaahsan sharaxaad ku saabsan sida ay u gudbiyaan xiriirada, emails, jadwalka taariikhda, music, videos, sawiro iyo waraaqo kale oo marka bedesheen ka Android inay iPhone, lahaa wax badan ka sahlan in ay la tacaalaan leh, u baahan tahay oo keliya in ay samir iyo qaado qaar ka mid ah waqti ay ku dhameysan oo dhan oo iyaga ka mid.
Haddii aad tahay la'aan waqtiga oo aad rabto si dhakhso ah u baddashaan iPhone, qaar ka mid ah qalab xisbiga 3aad sida Wondershare MobileGo laga yaabaa inuu taam u wanaagsan. Iyada oo taageero ka this qalab xidhiidh mobile, waxaan si fudud oo si deg deg ah wareejin karaan dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay ka Android inay iPhone la hal-click. Qaybta ugu fiican waa Android oo iPhone ma aha oo kaliya waxaa taageera, ee Blackberry iyo Nokia sidoo kale lagu soo daray. Halkan waa shaashada ee MobileGo hoos ku qoran si aad tixraac, iyo talaabooyinka aad u fudud:
Download ku MobileGo Wondershare oo ku xidh.
Double click inuu ku soo bilowdo qalabka, ka dibna u jiheysan Super qalabeed iyo abuurtaan Transfer Phone ah.
Riix Phone in ay Transfer Phone oo hubi waxa ku jira loo baahan yahay, riix Start Copy, habka file wareejinta ku bilaaban doono.
Sug daqiiqado (wakhtiga saxda ku xiran tahay sida badan oo files aad wareejiyo) si aad u samaysay shaqada.
Waxay u egtahay weyn, sax? Qof kasta oo si fudud oo si deg deg ah u gudbiyaan yaabaa macluumaadka loo baahan yahay ka Android ay u iPhone effortlessly, waxa ay taasi habka xidhiidh Android raaxo badan oo la aqbali karo. Ka sokow MobileGo aan halkan ku soo jeediyay, waxaa kale oo jira kale xogta ku wareejiyo qalabka iyo barnaamijyada moobiilllada heli karaa, ee ka dooro mid ah aad jeceshahay oo waxaad ka samaysaa xidhiidh ka dhici.